Amiirkii Al Shabaab ee Sh. Hoose & sarkaal la socdey oo isu soo dhiibey DF + Sawirro | Hadalsame Media
Home Wararka Amiirkii Al Shabaab ee Sh. Hoose & sarkaal la socdey oo isu...
Amiirkii Al Shabaab ee Sh. Hoose & sarkaal la socdey oo isu soo dhiibey DF + Sawirro
(Shabeellaha Hoose) 30 Maarso 2019 – Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in uu iyada isu soo dhiibey amiirkii Al-Shabaab ee gobolka Shabellaha Hoose oo magaciisa la yiraahdo Ibraahim Maxamed Bitow iyo ilaaliyihiisii gaarka ahaa.
Labadan nin ayaa isu soo dhiibey ciidamada Xoogga Dalka, gaar ahan qaybta lagu magacaabo 14-ka Oktoobar, oo ka howlgasha gobolkaasi.
Ninkan iyo ninkii wehlinayay oo sida sawirrada ka muuqata watey qoryo fudud ayaa la sheegayaa loo sii gudbiyay taliska sare ee Xoogga Dalka Somalia.
Ciidamada DF Somalia, gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Shabeellaha hoose, ayaa beryihii dambe karraarinayay howlgallada ka dhanka ah kooxda Al Shabaab oo weerarro badan oo shacabka rayidka ah ka dhan ah ka fulisey Muqdisho iyo meelo kale.
DF Somalia ayaan lahayn barnaamij dhaqan celin ah oo la ogyahay oo ay maraan dadka la sheego inay kasoo goostaan kooxda AS.
Previous articleXukumaadda oo iminka u fadhida kulan deg deg ah oo aan caadi ahayn! (Go’aamada laga filan karo)
Next articleCEEB: Dalalka Khaliijka oo kharash badan ku bixiya in la noco Muslimiinta Galbeedka (Taageero ay siiyaan kooxaha Midigta Fog & ujeedka)